1, 2. (a) Jesu akasimbisa sei ukoshi hwokuronga? (b) Kuronga kunokosha zvikurukuru munzvimboi?
KUVAKA chivako kunoda gadziriro yokungwarira. Nheyo isati yaiswa, nzvimbo inofanira kuwanwa uye mapurani anofanira kuitwa. Zvisinei, chimwe chinhuzve chinokosha. Jesu akati: “Ndiani kwamuri, kana achida kuvaka svingo, usingatangi kugara pasi, akaverenga kukosha kwayo, kuona kana ane mari yokuipedzisa nayo?”—Ruka 14:28.
2 Chiri chechokwadi nezvokuvaka chivako chinoshandawo kukuvaka roorano inobudirira. Vazhinji vanoti: “Ndinoda kuroora kana kuti kuroorwa.” Asi vangani vanomira kuti varangarire ndyiko? Nepo Bhaibheri richitaura zvakanaka nezveroorano, rinokweverawo ngwariro kudenho idzo roorano inopa. (Zvirevo 18:22; 1 VaKorinte 7:28) Naizvozvo, avo vari kurangarira roorano vanofanira kuva nomurangariro wechokwadi wezvose zviri zviviri zvikomborero nendyiko zvokuroora kana kuti kuroorwa.
3. Neiko Bhaibheri riri yamuro inokosha kuavo vanoronga nokuda kweroorano, uye mibvunzoi mitatu iyo richatibetsera kupindura?
3 Bhaibheri rinogona kubetsera. Zano raro rakafuridzirwa noMuvambi weroorano, Jehovha Mwari. (VaEfeso 3:14, 15; 2 Timotio 3:16) Tichishandisa nheyo dzinowanwa muiri bhuku rinotungamirira rakare bva rinowirirana nomusi zvikuru, ngatiwanei kuti (1) Munhu anogona sei kuziva kana iye agadzirira nokuda kweroorano? (2) Chii chinofanira kutsvakwa mumukwanyina? uye (3) Nyengano inogona sei kuchengetwa ichikudzwa?
WAGADZIRIRA NOKUDA KWEROORANO HERE?
4. Chii chiri chinhu chinokosha mukuchengeta roorano inobudirira, uye nei?
4 Kuvaka chivako kungava kunodhura, asi kutarisira kuchengetwa kwacho kwenguva refu kunodhurawo. Kwakafanana neroorano. Kuroora kana kuti kuroorwa kunoratidzika kuva kunodenha zvakakwana; zvisinei, kuchengeta ukama hweroorano gore negore kunofanirawo kurangarirwa. Kuchengeta ukama hwakadaro kunobatanidzei? Chinhu chinokosha kuzvipira kwomwoyo wose. Hekuno kurondedzera kunoita Bhaibheri ukama hweroorano: “Munhu unofanira kusiya baba vake na[a]mai vake, anamatire mukadzi wake, vave nyama imwe.” (Genesi 2:24) Jesu Kristu akapa chikonzero chapaMagwaro bedzi chechatanuro chine bviro yokuroorazve kana kuti kuroorwazve—“upombwe,” ndiko kuti, vatano isiri yapamutemo kunze kweroorano. (Mateo 19:9) Kana uri kurangarira roorano, yeuka iyi mipimo yapaMagwaro. Kana usati wagadzirira nokuda kwouku kuzvipira kwakakomba, ipapo hausati wagadzirira nokuda kweroorano.—Dheuteronomio 23:21; Muparidzi 5:4, 5.
5. Kunyange zvazvo kuzvipira kwakakomba kweroorano kuchityisa vamwe, neiko panzvimbo pezvo kuchifanira kukosheswa zvikuru naavo vanorangarira kuroora kana kuti kuroorwa?
5 Pfungwa yokuzvipira kwakakomba inotyisa vazhinji. “Kuziva kuti vaviri vedu takabatanidzwa pamwe chete kwoupenyu hwose kwakaita kuti ndinzwe ndichiganhurirwa, ndakapfigirwa, ndakaganhurirwa chose chose,” rakadaro rimwe jaya. Asi kana uchida chaizvoizvo munhu waunorangarira kuroora kana kuti kuroorwa naye, kuzvipira hakusati kuchizoratidzika somutoro. Panzvimbo pezvo, kucharangarirwa samanyuko echengeteko. Pfungwa yokuzvipira inobatanidzwa muroorano ichaita kuti varoorani vade kugara pamwe chete munguva dzakanaka nedzakashata uye kutsigirana chauya chauya. Muapostora wechiKristu Pauro akanyora kuti rudo rwechokwadi “runofukidza zvose” uye “runotsungirira pazvose.” (1 VaKorinte 13:4, 7) “Kuzvipira kweroorano kunondiita kuti ndinzwe ndakachengeteka zvikuru,” anodaro mumwe mukadzi. “Ndinoda kunyaradza kwokuva tabvuma kwatiri timene nenyika kuti tinoda kubatana pamwe chete.”—Muparidzi 4:9-12.
6. Neiko kwakanakisisa kusamhanyira muroorano pazera duku?
6 Kurarama maererano nokuzvipira kwakadaro kunoda ukuru. Nokudaro, Pauro anopa zano kuti vaKristu vanoita zviri nani kusaroora kana kuti kusaroorwa kusvikira va“tokura kwazvo,” nhambo apo mirangariro yevatano inosimba uye inogona kukanganisa chisarudzo chomunhu. (1 VaKorinte 7:36) Vanhu vaduku vanochinja nokukurumidza sezvo vanokura. Vakawanda vanoroora kana kuti kuroorwa apo vanenge vari vaduku zvikuru vanoona kuti pashure pamakore mashomanene chete zvinodikanwa zvavo nezvishuvo, pamwe chete neizvo zvomukwanyina wavo, zvachinja. Maidi anozivisa kuti vechiduku vanoroora kana kuti kuroorwa sezvingabvira zvikuru kwazvo vachava vasingafari ndokutsvaka chatanuro kupfuura avo vanoti mirei. Naizvozvo usamhanyira muroorano. Makore akati anopedzwa uchigara somuduku, usina kuroora kana kuti kuroorwa anogona kukupa ruzivo rwokuzviwanira runokosha urwo rwuchakuita akakura zvikuru naakakwaniriswa zviri nani kuva mukwanyina akakodzera. Kumira kuroora kana kuti kuroorwa kunogona kukubetsera kuzvinzwisisa umene zviri nani—chinodikanwa kana uchizotanga ukama hunobudirira muroorano yako.
TANGA KUZVIZIVA UMENE
7. Neiko avo vanoronga kuroorana vachifanira kutanga kuzvinzvera vamene?
7 Unokuwana kuri nyore here kuronga mavara aunoda mumukwanyina? Vazhinjisa vanodaro. Zvisinei, zvakadiniko namavara ako umene? Mavarai ayo unawo achakubetsera kugovera kuroorano inobudirira? Rudzii rwomurume kana kuti rwomudzimai rwauchava? Somuenzaniso, unobvuma zvakasununguka zvikanganiso zvako ndokugamuchira zano here, kana kuti nguva dzose unozvidzivirira apo unoruramiswa here? Unowanzova anofara neane tariro here, kana kuti unorundumwara, uchiwanzonyunyuta here? (Zvirevo 8:33; 15:15) Yeuka, roorano haisati ichizochinja unhu hwako. Kana uchidada, uchinyanyotapurika, kana kuti uchinyanyova asina tariro apo unenge usina kuroora kana kuti kuroorwa, uchava zvimwe chetezvo apo unoroora kana kuti kuroorwa. Sezvo kwakaoma kuzviona timene nenzira iyo vamwe vanotiona nayo, kuregererei kukumbira mubereki kana kuti shamwari inovimbwa nokuda kwetsinhiro dzakananga nezvikarakadzo? Kana ukaziva nezvechinjo dzingagona kuitwa, shandira pane idzodzi usati waita nhanho dzokuroora kana kuti kuroorwa.
8-10. Bhaibheri rinopa zanoi richabetsera munhu kugadzirira nokuda kweroorano?
8 Bhaibheri rinotikurudzira kubvumira mudzimu mutsvene waMwari kushanda matiri, uchibereka mavara akadai so“rudo, mufaro, rugare, mwoyo murefu, mutsa, runako, kutenda, unyoro, kuzvidzora.” Rinotiudzawo ku“vandudzwa musimba rinonyandura ndangariro” yedu uye ku“pfeka unhu hutsva hwakasikwa maererano nokuda kwaMwari mukururama kwechokwadi noruvimbiko.” (VaGaratia 5:22, 23; VaEfeso 4:23, 24, NW) Kushandisa iri zano uchiri asina kuroora kana kuti kuroorwa kuchava kwakafanana nokuisa mari mubhangi—chimwe chinhu chichabvumikisa kuva chinokosha zvikuru mune ramangwana, apo unoroora kana kuti kuroorwa.
9 Somuenzaniso, kana iwe uri mukadzi, dzidza kupa ngwariro huru ku“munhu wakavanzika womwoyo” kupfuura zvaunoita kuchitarisiko chako chomuviri. (1 Petro 3:3, 4) Kuva nomwero nendangariro yakanaka zvichakubetsera kuva nouchenjeri, “korona inobwinya” yechokwadi. (Zvirevo 4:9; 31:10, 30; 1 Timotio 2:9, 10) Kana uri murume, dzidza kubata vakadzi nenzira yomutsa neyokuremekedza. (1 Timotio 5:1, 2) Uchidzidza kuita zvisarudzo nokutakura mutoro, dzidzawo kuva nomwero naanozvininipisa. Chimiro chendangariro chokudzvinyirira chichatungamirira kuchinetso muroorano.—Zvirevo 29:23; Mika 6:8; VaEfeso 5:28, 29.
10 Kunyange zvazvo kushandura ndangariro muaya mativi kusati kuri nyore, ndichimwe chinhu vaKristu vose vanofanira kushandira pachiri. Uye kuchakubetsera kuva mukwanyina ari nani weroorano.
11, 12. Vanhu vaviri vangawana sei kana vachiwirirana kana kuti kwete?
11 Itsika here kwaunogara kuti munhu asarudze mukwanyina wake amene weroorano? Kana zvakadaro, unofanira kuita sei kana ukawana mumwe munhu ane mitezo yevatano yakasiyana anokwezva? Kutanga, zvibvunze umene kuti, ‘Kuroorana ndiko vavariro yangu chaizvoizvo here?’ Utsinye kutamba nemirangariro yomumwe munhu kupfurikidza nokumutsa kariro dzenhema. (Zvirevo 13:12) Ipapo, zvibvunze umene kuti, ‘Ndinokwanisa kuroora kana kuti kuroorwa here?’ Kana mhinduro kumibvunzo yose iri miviri iri hungu, nhanho dzaunotevera kuita dzichasiyana kuchitsamira patsika yomunzvimbomo. Mudzimwe nyika, pashure pokucherekedza kwechinguvana, ungasvika munhu wacho ndokutaura chishuvo chokuda kuzivana naye zviri nani. Kana mhinduro iri aiwa, usapfuurire kusvika papfundo rokuva anogumbura. Yeuka, mumwe munhu wacho anewo maruramiro okuita chisarudzo munhau yacho. Kana, zvisinei, mhinduro iri hungu, mungaronga kupedza nguva muri pamwe chete mumibato yakanaka. Ikoku kuchakupa mukana wokuona kana roorano nouyu munhu ingava yokuchenjera. * Chii chaunofanira kutsvaka paiyi nguva?
12 Kupindura mubvunzo iwoyu, fungidzira zviridzwa zviviri, zvichida piyano negitare. Kana zvakagadzirwa zvakarurama, chimwe nechimwe chinogona kubudisa rwiyo rwacho zvakaisvonaka. Bva, chii chinoitika kana izvi zviridzwa zvikaridzwa pamwe chete? Zvino zvinofanira kuwiriraniswa nechimwe nechimwe. Kwakafanana newe nomukwanyina anokarirwa. Mumwe nomumwe wenyu angave akashanda zvakaoma ku“gadzira” mavara ounhu hwenyu savanhu vamwe navamwe. Asi mubvunzo zvino ndouyu: Munotsinhirana here nomumwe nomumwe? Namamwe mashoko, munowirirana here?
13. Neiko kuri kusachenjera zvikuru kunyengana nomumwe munhu asingagoverani kutenda kwako?
13 Kunokosha kuti mose muri vaviri muve nezvitendero nenheyo zvakafanana. Muapostora Pauro akanyora, kuti: “Musasungwa zvisina kufanira pajoko pamwe chete navasingatendi.” (2 VaKorinte 6:14; 1 VaKorinte 7:39) Kuroorana nomumwe munhu asingagoverani kutenda kwako muna Mwari kunoita kuti kuve kungabvira zvikuru kuti kuchava nekusatsinhirana kwakakomba. Pane rumwe rutivi, kuzvipira kwenyu muri vaviri kuna Jehovha Mwari chikonzero chakasimba zvikurusa chechinzwano. Jehovha anoda kuti muve vanofara uye kufarikanya chisungo chapedyosa chinobvira nomunhu waunoroorana naye. Anoda kuti usungirwe kwaAri nokune mumwe nomumwe nechisungo chakakoshwa katatu chorudo.—Muparidzi 4:12.
14, 15. Kuva nokutenda kumwe cheteko ndiko rutivi bedzi rwechinzwano muroorano here? Tsanangura.
14 Nepo kunamata Mwari pamwe chete kuri rutivi runokosha zvikurusa rwechinzwano, zvakawanda zvinobatanidzwa. Kuti muwirirane nomumwe nomumwe, iwe nomukwanyina wako anokarirwa munofanira kuva nenharidzano dzakafanana. Ndedzipi dziri nharidzano dzenyu? Somuenzaniso, mose muri vaviri munonzwa sei pamusoro pokuva navana? Zvinhui zvine nzvimbo yokutanga muupenyu hwenyu? * (Mateo 6:33) Muroorano inobudirira zvirokwazvo, vaviri vacho ishamwari dzakanaka uye vanofarikanya ushamwari hwomumwe nomumwe. (Zvirevo 17:17) Nokuda kwaikoku, vanofanira kuva nefariro dzakafanana. Kwakaoma kuchengeta ushamwari hwapedyo—zvikurukuru roorano—apo ikoku kunenge kusina kudaro. Zvisinei, kana mukwanyina wako anokarirwa achifarikanya mubato wakati, zvakadai sokufamba, uye iwe usati, ikoko kunoreva here kuti vaviri venyu hamufaniri kuroorana? Kwete hazvo. Zvichida munogoverana dzimwe fariro, dzinokosha zvikuru. Uyezve, ungapa mufarwa kumukwanyina wako anokarirwa kupfurikidza nokugoverana mumibato yakanaka nemhaka yokuti mumwe munhu anoifarikanya.—Mabasa 20:35.
15 Zvirokwazvo, kusvikira kumwero mukuru, wirirano inowanwa nokuti mose muri vaviri munochinjika sei panzvimbo pokuti makafanana sei. Panzvimbo pokubvunza kuti, “Tinobvumirana pachinhu chiri chose here?” mibvunzo iri nani ingava yokuti: “Chii chinoitika apo tinosabvumirana? Tinogona here kukurukura zvinhu zvakadzikama, tichipana ruremekedzo nechiremera? Kana kuti kurukurirano dzinowanzoipa kuva nharo huru here?” (VaEfeso 4:29, 31) Kana uchida kuroora kana kuti kuroorwa, ngwarira munhu upi noupi anodada neane chisimbwa, asingatongodisi kutera, kana kuti anorayira nguva dzose nokuronga kuita zvinhu nenzira yake amene.
WANA PACHINE NGUVA MBERI
16, 17. Chii icho murume kana kuti mukadzi angatsvaka pakurangarira mukwanyina weroorano anokarirwa?
16 Muungano yechiKristu, avo vanoronzeswa mutoro vanofanira kuti “vatange kuidzwawo.” (1 Timotio 3:10) Iwewo unogona kushandisa iyi nheyo. Somuenzaniso, mukadzi angabvunza kuti, “Rudzii rwomukurumbira rune uyu murume? Ndivanaani vari shamwari dzake? Anoratidza kuzvidzora here? Anobata sei vanhu vakwegura? Rudzii rwemhuri rwaanobva mairi? Anoshandira pamwe navo sei? Chii chiri chimiro chake chendangariro kumari? Anoshandisa zvinwiwa zvinodhaka zvisina kufanira here? Haatani kushatirwa here, kunyange kuva ane masimba masimba? Mitoroi yeungano yaanayo, uye anoiita sei? Ndingagona kumuremekedza zvikuru here?”—Revhitiko 19:32; Zvirevo 22:29; 31:23; VaEfeso 5:3-5, 33; 1 Timotio 5:8; 6:10; Tito 2:6, 7.
17 Murume angabvunza kuti, “Uyu mukadzi anoratidzira kuda nokuremekedza Mwari here? Anokwanisa kutarisira musha here? Mhuri yake ichakarirei kwatiri? Akachenjera here, anobishaira here, ane rutsuta here? Chii chaanotaura pamusoro pacho? Anoitira hanya zvechokwadi garikano yavamwe here, kana kuti ane udyire here, haaregi zvavamwe here? Akavimbika here? Anodisa kuzviisa pasi poumusoro, kana kuti ane chisimbwa, zvichida kunyange kupandukira here?”—Zvirevo 31:10-31; Ruka 6:45; VaEfeso 5:22, 23; 1 Timotio 5:13; 1 Petro 4:15.
18. Kana utera huduku hukacherekedzwa mukati menyengano, chii chinofanira kurangarirwa?
18 Usakanganwa kuti uri kubata nomuzukuru asina kukwana waAdhama, kwete gamba kana kuti gamba rechikadzi romunovhero yavanhu vekare vokufungidzira. Munhu ari wose ane zvikanganiso, uye zvimwe zvaizvozvi zvichafanira kufuratirwa—zvose zviri zviviri zvako nezvomukwanyina wako anokarirwa. (VaRoma 3:23; Jakobho 3:2) Uyezve, utera hunocherekedzwa hunogona kupa mukana wokukura. Somuenzaniso, ngatitii mukati menyengano yenyu munova nenharo. Rangarirai: Kunyange vanhu vanodana nokuremekedzana havabvumirani padzimwe nguva. (Enzanisa naGenesi 30:2; Mabasa 15:39.) Kungagona kuva here kuti mose muri vaviri munongoda zvenyu ku‘dzora mudzimu wenyu’ zvakati kuti ndokudzidza nzira yokupedza nayo zvinhu norugare zvikuru? (Zvirevo 25:28) Mukwanyina wako anokarirwa anoratidza chishuvo chokuvandudza here? Iwe unodaro here? Ungagona here kudzidza kusava anotapurika zvikuru, asingagumbuki zvikuru? (Muparidzi 7:9) Kudzidza kupedza zvinetso kunogona kutanga mutoo wekurukurirano yokutendeseka iyo inokosha kana vaviri venyu mukaroorana.—VaKorose 3:13.
19. Ndeipi ingava nzira yokuchenjera yechiito kana zvinetso zvakakomba zvikaoneka mukati menyengano?
19 Zvakadini, kunyange zvazvo zvakadaro, kana ukacherekedza zvinhu zvinokunetsa zvikuru? Panikiro dzakadaro dzinofanira kusanorangarirwa. Hazvinei hazvo nokuti unganzwa uchikwezva sei kana kuti ungave uchidisa sei kuroora kana kuti kuroorwa, usafuratira mhosho dzakakomba. (Zvirevo 22:3; Muparidzi 2:14) Kana uchifambidzana nomumwe munhu waunopanikira zvakakomba, kuchenjera kurega kufambidzana kwacho uye kurega kuita kuzvipira kunogarisa kumunhu iyeyo.
CHENGETAI NYENGANO YENYU ICHIKUDZWA
20. Vaviri vari kunyengana vanogona sei kuchengeta mufambiro wavo usingazvidzwi?
20 Munogona sei kuchengeta nyengano yenyu ichikudzwa? Kutanga, ivai nechokwadi chokuti mufambiro wenyu wetsika hauzvidzwi. Kwamunogara, kubatana maoko, kutsvodana, kana kuti kumbundirana zvinorangarirwa kuva mufambiro wakafanira nokuda kwavasina kuroorana here? Kunyange kana kuratidzirwa kwakadaro kwechidakadaka kuchitenderwa, kunofanira kubvumirwa bedzi apo ukama hwacho hunenge hwasvika panguva apo roorano inorongwa chaizvoizvo. Ngwarirai kuti kuratidzirwa kwechidakadaka hakupindi mumufambiro usina kuchena kana kuti kunyange ufeve. (VaEfeso 4:18, 19; enzanisa neRwiyo rwaSoromoni 1:2; 2:6; 8:5, 9, 10.) Nemhaka yokuti mwoyo unonyengera, mose muri vaviri mungava vakachenjera kudzivisa kuva moga mumba, mufurati, mumotokari yakapakwa, kana kuti munzvimbo ipi neipi zvayo ingapa mukana womufambiro usina kururama. (Jeremia 17:9) Kuchengeta nyengano yenyu yakachena mutsika kunopa ufakazi hwakajeka hwokuti munozvidzora uye kuti munoisa itiro hanya isiri youdyire yegarikano yomumwe pamberi pezvishuvo zvenyu mumene. Chinokosha zvikurusa, nyengano yakachena ichafadza Jehovha Mwari, uyo anorayira vabatiri vake kurega kusachena noufeve.—VaGaratia 5:19-21.
21. Ikurukuriranoi yokutendeseka ingadikanwa nokuda kwokuchengeta nyengano ichikudzwa?
21 Kechipiri, nyengano inokudzwa inobatanidzawo kurukurirano yokutendeseka. Sezvo nyengano yenyu inofambira mberi kuroorano, zvinhu zvakati zvichafanira kukurukurwa nenzira yokutendeseka. Muchagara kupi? Mose muri vaviri muchashanda kunyika here? Munoda kuva navana here? Uyewo, kunongova kwakanaka bedzi kuzivisa zvinhu, zvichida zvomunguva yakapfuura yomunhu, izvo zvingagona kutapura roorano. Izvozvi zvingabatanidza zvikwereti zvikuru kana kuti misengwa kana kuti zvinhu zvoutano, zvakadai sehosha ipi neipi yakakomba kana kuti mamiriro ezvinhu aungava nawo. Sezvo vanhu vakawanda vane HIV (utachiona hunoparira AIDS) vasingaratidzi zviratidzo zvacho nokukurumidza, kungava kwakarurama kuti munhu kana kuti vabereki vanoitira hanya vakumbire kuedzwa kweropa nokuda kweAIDS romunhu uyo munguva yakapfuura aisasarudza muvatano kana kuti aiva mushandisi wemirimo inopinzwa mutsinga. Kana kuedza kwacho kukabvumikisa kuti anayo, munhu anayo haasati achifanira kudzvinyirira mukwanyina anorangarirwa kupfuuridzira ukama hwacho kana iyewo zvino achida kuhugumisa. Chaizvoizvo, munhu upi noupi aiva nomuraramiro une ngozi zvikuru angaita zvakanaka kubvuma kuedzwa nokuda kweAIDS asati avamba nyengano.
KUTARIRA MBERI KWOMUCHATO
22, 23. (a) Dzikamo ingagona kuraswa sei pakugadzirira muchato? (b) Murangariroi wakadzikama unofanira kuchengetwa pakurangarira muchato neroorano?
22 Mukati memwedzi yokupedzisira roorano isati yaitika, mose muri vaviri sezvingabvira muchava vakabatikana zvikuru nokuronga muchato. Munogona kuderedza yakawanda yedzvinyiriro kupfurikidza nokuva vane mwero. Muchato wamaoresa ungafadza hama dzokunyama nenzanga, asi ungasiya vachangobva kuchata nemhuri dzavo vaneta mumuviri uye vasisina mari. Namatiro yakati kutsika dzomunzvimbomo ine mufungo, asi kuwirirana kwokunyanyisa uye zvichida kwemakwikwi kunogona kudzikatidza revo yenhambo yacho uye kungakutorerai mufaro wamunofanira kuva nawo. Nepo mirangariro yavamwe ichifanira kurangarirwa, chikomba chine mutoro zvikurukuru wokusarudza chichaitika pamadyo omuchato.—Johane 2:9.
23 Yeukai kuti muchato wenyu unongova wezuva rimwe chete, asi roorano yenyu inogara nduramo yose. Dzivisai kunyanyonangidzira ngwariro yakawanda pachiitiko chokuroora kana kuti kuroorwa. Panzvimbo pezvo, tarirai kuna Jehovha Mwari nokuda kwenhungamiro yenyu, uye rongai pachine nguva mberi nokuda kwoupenyu hwokuva vakaroorana. Ipapo muchava masanogadzirira nokuda kweroorano inobudirira.
^ ndima 11 Ikoku kungashanda munyika umo kufambidzana naane mitezo yevatano yakasiyana kunorangarirwa sokwakafanira nokuda kwevaKristu.
^ ndima 14 Kunyange muungano yechiKristu, mungava navamwe vanobatanidzwa zvishomanene. Panzvimbo pokuva vabatiri vomwoyo wose vaMwari, vangapesvedzerwa nezvimiro zvendangariro nomufambiro zvenyika.—Johane 17:16; Jakobho 4:4.
IDZI NHEYO DZEBHAIBHERI DZINOGONA SEI KUBETSERA . . . MUNHU KUGADZIRIRA NOKUDA KWEROORANO INOBUDIRIRA?
Murume nomudzimai vanofanira kuva vakazvipira kune mumwe nomumwe.—Genesi 2:24.
Munhu womukati anokosha zvikuru kupfuura chitarisiko chokunze.—1 Petro 3:3, 4.
“Musasungwa zvisina kufanira pajoko.”—2 VaKorinte 6:14.
Vanhu vasina kuchena mutsika vakaparadzaniswa naMwari.—VaEfeso 4:18, 19.
Roora Nezvinouya Nomwenga: Mudzimwe nyika mhuri yechikomba inokarirwa kupa mari kumhuri yomwenga (roora). Mudzimwe, mhuri yomwenga inopa mari kuchikomba (zvinouya nemwenga). Pangava nechinhu chisina kururama neidzi tsika chero bedzi dziri dzapamutemo. (VaRoma 13:1) Zvisinei, muchiitiko chipi nechipi, mhuri inogamuchira inofanira kudzivisa kuchaja nemakaro mari yakawanda kana kuti zvinhu kupfuura zvine mufungo. (Zvirevo 20:21; 1 VaKorinte 6:10) Uyezve, kubhadharwa kweroora hakutongofaniri kunzwisiswa kureva kuti mudzimai anongova zvake chinhu chinotengwa; uyewo murume haafaniri kurangarira kuti mutoro wake bedzi kumudzimai wake nehama dzomudzimai wake ndowezvemari.
Barika: Dzimwe tsika dzinobvumira murume kutora vadzimai vanopfuura mumwe. Mumamirire ezvinhu akadaro, murume angava ishe panzvimbo pomurume nababa. Kupfuurirazve, barika rinowanzokurudzira makwikwi pakati pavadzimai. Nokuda kwavaKristu, Bhaibheri rinobvumira bedzi kusaroora kana kuti kusaroorwa kana kuti kuva nomudzimai mumwe.—1 VaKorinte 7:2.
Roorano Yokuedza: Vakawanda vanotaura kuti kugara pamwe chete roorano isati yaitika kuchavabetsera kuedza kuwirirana kwavo. Bva, roorano yokuedza haisati ichiedza chimwe chezvinhu zvinokosha zvikurusa zveroorano—kuzvipira. Hakuna gadziriro kunze kweroorano inopa mwero mumwe chetewo wedziviriro nechengeteko kumativi ose—kubatanidza vana vapi navapi vangabva mumubatanidzwa wacho. Mumeso aJehovha Mwari, kugara pamwe chete muchibika mapoto pasina muchato ufeve.—1 VaKorinte 6:18; VaHebheru 13:4.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Kugadzirira Nokuda Kweroorano Inobudirira
fy chits. 2 pp. 13-26